Imvelaphi kunye nokusetyenziswa kweZeolite
ngomphathi ku 21-08-11
I-Zeolite yiminerali yendalo eveliswe luthuthu lwentaba-mlilo ewela kumthombo wamanzi ane-alkaline kwaye iphantsi koxinzelelo kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Umdibaniso woxinzelelo ubangela ukuba uZeolite enze i-3D silica-oxygen tetrahedral isakhiwo esine-honeycomb structure kunye ne-pores. Yenye yezimbiwa ezinqabileyo nge natur ...
Ukusetyenziswa kwe-zeolite kulwakhiwo kumzi mveliso wokwakha
Ngenxa yobunzima bokukhanya kwe-zeolite, iiminerali zendalo ze-zeolite zisetyenziswe njengezinto zokwakha kangangamakhulu eminyaka. Okwangoku, i-zeolite luhlobo olutsha lwezinto ezinobungqongileyo, kwaye umzi mveliso ufumene izibonelelo zokusebenzisa umgangatho ophezulu / ucoceko lwe-zeolite ukuvelisa ixabiso elongezwe ...
Uhlaziyo lwetekhnoloji ye-perlite yenza ukuba ukuphunyezwa kolwakhiwo oluhlaza kube sengqiqweni ngakumbi
ulwakhiwo oluhlaza luhlobo olutsha lwesakhiwo ebesikhuthaza iminyaka emininzi kodwa khange senziwe. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ukukhangelwa kwezinto zokwakha yinkqubo engapheliyo. Ukuveliswa kutshanje kwetekhnoloji yemveliso ye-perlite kukutshintsha kwe-perlite engacimi mlilo ...